China Kuchenesa Mbeu & Kugadzira Muchina 5XZS-10DS vagadziri nevatengesi | SYNMEC
5XZS-10DS Mbeu Yekuchenesa & Kugadzira Muchina
Gorosi rinodyiswa mumudziyo wegorosi (musarudzo) kugoko, rosimudzwa nerevheti yebhakiti, pinda muhunde diki inozunguza inosefa kuti ikurumidze kubvisa tsvina diki, huru, uye kusachena kwakareruka, ipapo gorosi rinopinda patafura yegiravhiti yekubvisa mbeu yakaipa (zvishoma). kudyiwa, kusakura, kukuvara kwezvipembenene, mhodzi inorwara, nezvimwewo). Pakupedzisira gorosi rinopinda muhunde yekusefa yekubvisa hombe & diki tsvina zvakare, zvakare kuisa mhodzi kune akasiyana saizi renji. Gorosi rinobva kunze rinova mbeu inogona kudyarwa muvhu zvakananga.
Basa: Kucheneswa kwemhepo, pre-kuchenesa, kupatsanura giravhiti, vibration sieve kuchenesa & kugidha.
Kugona 10 ton/awa yembeu (kuverenga gorosi)
Chiyero chekuchenesa: >97%
Sieve yekuchenesa mhando: Rubber bhora vibration
Kuisa magetsi: 3 chikamu
Simba: Zvose: 15.75Kw
Bucket lift: 0.75kw
Pre-cleaner vibration mota: 0.25Kw X 2 seti
Mhepo inovhuvhuta yepamusoro: 5.5Kw
Tafura yegiravhiti: 7.5kw
Main sieving trunk vibration mota: 0.75Kw X 2 seti
5XZS-10DS Mbeu Yekuchenesa & Kugadzira Muchina wakagadzirwa nekuchenesa mhepo, kufanocheneswa, kupatsanura giravhiti, kuchenesa sieve uye kugadzika. Iyi modhi ine akawanda mabasa pane imwe nharembozha yekuchenesa mbeu inoita kuti ive yakanakira kushandiswa kwakakura.
Multifunctions akasanganiswa mumuchina mumwe
Hopper yekudyara inogonesa kuzadza gorosi mumudziyo wegorosi wekucheka gorosi. Ipapo gorosi rinodyiswa kubva mubhaketi rinosimudza hopper rinotakurwa kuenda kune pre-cleaner. Mushure mekukurumidza bvisa iyo undersize uye oversize tsvina, ipapo mbeu inodonha kumhepo yekuchenesa mukamuri yekubvisa kusvibiswa kwechiedza neguruva. Imba huru yekuchenesa mhepo ichaunza yakanakisa kuchenesa mhepo kunyatsoshanda. Zvadaro mhepo yakacheneswa zvinhu inopinda kune giravhiti separator kuti ibvise mbeu dzakaipa (dzinodyiwa zvishoma, dzisati dzakura, kukuvara kwezvipembenene, mbeu dzinorwara, nezvimwewo). Mushure mekugadzirwa negiravhiti separator, mhodzi ichauya kune mbiri mune imwe vibratory sieving trunk kubvisa tsvina huru nediki. Mutengi anogonawo kusarudza masefa mana akaturikidzana sieving trunk ayo asingangobvisi tsvina huru nediki, asiwo kuisa mhodzi kusvika pamatanho matatu nehukuru (huru, yepakati nediki).
Zvakapfuura: 5XZS-20DS muchina wekuchenesa zviyo wechibage chesame
Zvinotevera: 5XZS-10DGT Kuchenesa Mbeu & Kugadzira Muchina
Chirimwa cheKugadzira Mbeu
Murimwa weKugadzira Mbeu
Gorosi Inogadzira Mbeu
5XQS-5 Destoner yechibage kofi bhinzi paddy ric...
Belt conveyor yezviyo chibage bhinzi yegorosi